कसरी भयो बुटवलमा ज्यान जाने झडप ? प्रहरीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु ५० जना घाइते - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
कसरी भयो बुटवलमा ज्यान जाने झडप ? प्रहरीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु ५० जना घाइते
रूपन्देहीको मोतिपुर क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बासीहरूबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको छ । गोली लागेर ४ जनाको ज्यान गएको छ भने ज्यान गुमाउनेमध्ये एक जनाको मात्रै सनाखत भएको छ।
मृत्यु भएकामध्ये एक जनाको मात्रै सनाखत भएको शिक्षण अस्पताल (युसिएमएस)का जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसार मृत्यु हुनेमा करिब ४८ वर्षीय कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका–४ का रमेश परियार रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु वाणगंगा १० का २० वर्षीय रमेश परियारको सनाखत भएको हो। उनको बेलुका साढे ६ बजे उपचारका क्रममा ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ज्यान गुमाने अरु तीन जना व्यक्तिको उपचारका लागि लैजादै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाउको छ । उनीहरू तिनै जनाको सनाखत भएको छैन।
झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर छ। छाती र पेटमा गहिरो चोट लागेका अन्य तीन जनाको अवस्था पनि गम्भीर रहेको बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेका प्रहरीहरुमा प्रनानि नबिन चालीसे, प्रज रिजन थापा, प्रज गोविन्द चौधरी, प्रज झविन्द्र परियार र प्रज विनोद परियार रहेका छन् ।
यस्तै प्रज अनिता कुँवर, प्रज मेघराज पुन, प्रज राकेश यादव, प्रज राज लौनिया, प्रज जितेन्द्र पुन,प्रज जगवीर पुन, प्रज प्रदीप ठाकुर, प्रज सुर्यनाथ रेग्मी र प्रनानि भरतराज पन्थीको पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै प्रज जय कुमार चौधरी, प्र.ना.नि.बाबुराम घिमिरे, प्रनाउ मदन कुँवर,प्र.नि. चक्र बहादुर डरमपाल, प्रह जगन्नाथ डाँगी र प्रज बिरेन्द्र सुनारीको पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नै प्रज झरना परियार, प्रज लिला वली, प्रज सुजन सोमरे, प्रज अजय कुँवर, प्रज मनराज घर्तीमगरको पनि उपचार भक्ष्रहेको छ । प्र.स.नि.बिमला विक (डिस्चार्ज) भएर मेडिकल कलेज भैरहवामा उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै नवलपरासी पश्चिम बर्दघाट नपा ४ बस्ने वर्ष २३ को विजय सहानीको कम्मरमा गोली लागेको छ भने उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
नवलपरासी पश्चिम बर्दघाट नगरपालिका ६ बस्ने ३० वर्षका विष्णु परियारलाई पनि गोली लागेको छ भने उनको अवस्था मध्यम खालको छ ।
यस्तै खुट्टामा गोली लागेका रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका ८ बस्ने ३२ वर्षका सन्तोष विकको अवस्था मध्यम खालको रहेको छ ।
यस्तै कुर्कुचामा गोली लागेका पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका २ बस्ने वर्ष १९ को समिर थापाको अवस्था सामान्य रहेको छ । रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका १३ बस्ने वर्ष ३४ को टुकबहादुर बुढाप्रितीको घाँटीमा सामान्य काटिएको छ ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका १७ बस्ने वर्ष ६२ को ज्ञानबहादुर गुरुङको हात काटेको छ । रुपन्देहीकै ओमसतीया गाउँपालिका ३ बस्ने वर्ष ६३ की मनरुमा झाको टाउकोमा चोल लागेको छ ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहाहनगरपालिका ११ बर्ष २२ को सुजन थापाको टाउकोमा चोट लागेको छ ।
त्यसै ठाउँका वर्ष ३४ को सुजन परियारको साप्रामा काटेको छ भने बर्ष ५२ को त्रिचन्द्र कुर्मीको आंखाको परेलामा चोट लागेको छ ।अर्घाखाँचीको बलकोट गाउँपालिका २ बस्ने वर्ष २४ को मेघराज कुमाल पनि घाइते भएका छन् । पाल्पा रिब्दीकोट गा.पा. २ बस्ने बर्ष ४३ को भीमबहादुर कार्कीको दाहिने खुट्टामा गोली लागेको छ ।